ကွန်ဖြူတာ screen ကို ပုံ နဲ့ video အဖြစ် ရိုက်ကူးလို့ရသလို ကြိုက်သလို edit လုပ်လို့ ရပါတယ်..zoom in ,zoom out လည်းပါတယ်.လိုင်စင်ကုတ်ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Bug Lab at 22:53 No comments: Links to this post
(ကိုညီနေမင်း ဆိုက်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
Posted by Bug Lab at 17:56 No comments: Links to this post
ယောကျာ်းလေးများအနေဖြင့် မိန်းကလေးများကို ဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးရန်နည်းလမ်းများ
၄- ပျော်အောင်ထားပါ။( ဟာသာများများဖတ်၍ ရယ်စရာပြောပါ။ မရယ်လျှင် ကလိထိုး၍ရယ်ခိုင်းပါ)။
၆- သူမ အတွက် $ များများသုံးပါ၊( အိမ်မှာ ရေသောက်ဗိုက်မှောက်နေပြီး စုဆောင်းထားသမျှ ဖွန်ကြောင်ခြင်းတွင်သုံးပါ)။
၇- သူမ ကြိုက်တတ်သည့်အစားအစာများကို ကျွေးပါ( စားသောက်ဆိုင်မသွားခင် မိမိတွင် $ မလုံလောက်ဟုထင်ပါက သူငယ်ချင်းထံမှ လည်ပင်းညှစ်ခဲ့ပါ၊ မိန်းကလေးများ အစားကြီးသော်ကြောင့်ဖြစ်ဧ။်)။
၈- သူမ အတွက် အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါစေ၊( ထမင်းဆာတယ်ဆိုလျှင် ခူးပြီးပါပြီ ဖြစ်နေရမည်)။
၉- သူမ စကားကို နားထောင်ပါ၊( ပေါက်သင်ညိုကို အတုယူ၍ အမြဲခေါင်းညိမ့်ပါ၊ ကွယ်ရာတွင် လုပ်ချင်ရာလုပ်ပေါ့)။
၁၀-သူမ ပြောသမျှကို အမြဲထောက်ခံပါ( အခြားသူများက သူမအား ငပေါဟု မြင်လာ၍ သူမအားထောက်ခံသောသင့်အား တပည့် 
၁၁-သူမ အတွက်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာအဆုံးထိသွားပါမည်။ ကောင်းကင်ကို ဒူးနဲ့ တိုက်ပါမည်၊ မိုးကြိုးပစ်လျှင် မိုးကြိုးကို ဒိုင်ဗင်ပစ်ဖမ်းပေးမည်ဟု ကြွေးကျော်ပါ။( တကယ်လုပ်လို့ရတာမှ မဟုတ်ပဲ ၊ တွေးမကြောက်ပါနှင့်)။
၁- ဘီယာသောက် လျှင် ဘီယာငဲ့ပေးပါ။( ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ နွားကြီးဖြီးနေပါလိမ့်မယ်)။
၂- show up naked ( ဤတွင် ဒိုင်လူကြီးမှ ခရာမှုတ်၍ ၁ ဂိုး -ဂိုးမရှိဖြင့် သရေကျသွားပါတယ်၊ ဆိုင်ဘူးထင်တယ်နော်)။
ဤကား ယောကျာ်းတို့အပေါ် ဆွဲဆောင်နည်းတည်း
Posted by Taikkyithar lay at 13:36 No comments: Links to this post
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အဘွားနေမကောင်းတာကို သတင်းမေးဖို့ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ သတင်းမေးနေတုန်းမှာ သူက စားပွဲခုံပေါ် တင်ထားတဲ့ မြေပဲဆံတွေကို ယူစားတော့တယ်။ သတင်းမေးပြီး အိမ်ပြန်ခါနီး အဘွားကို မြေပဲဆံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့ အဘွားက "အေး.. အဘွားလဲ အသက်ကြီးတော့ မ၀ါးနိုင်တော့တာနဲ့ အဲဒီမြေပဲဆံ အပြင်က ကပ်ထားတဲ့ ချောကလက်တွေလောက်ပဲ စုပ်စားနိုင်တော့တယ်ကွဲ့" ဟူတည်း။
Posted by Taikkyithar lay at 11:53 No comments: Links to this post
Posted by Taikkyithar lay at 11:46 No comments: Links to this post
ဒီနေ့ ၁၀ရက် ၁၀လ ။ ဒီမှာ အမျိုးသားနေ့။ holiday ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့နွားဇာတာ ပါတဲ့ဖွားကိ တယောက် က အလုပ် မနားရပါ ။ ကံမကောင်းရတဲ့ကြားထဲ E ဇာတ်လမ်းများ လာကြုံနေရတော့ E မှန်တဲ့မျက်နှာနဲ့E အကြောင်း ရေးချင် စိတ် ပေါက်လာ မိတယ်ပေါ့ ။ စောစောစီးစီး E တစ်တဲ့လူနာ အဖိုးကြီင်္း ။ ယဉ်ကျေးစွာပြောရရင်တော့ ဝမ်းချုပ် ၊ ဝမ်းမာ လို့ စမြင်းတုံး က စအို ဝ မှာတစ် နေတော့ ကုန်းကုန်းကွကွ နဲ့အဖိုးကြီး ပေါ့ ။ ထုံးစံအတိုင်း ဝမ်းချူဆေး ရည် ဂလစ်ဆရင်းဘော ၂ခု ( လက်ပစ်ဗုံး ၂လုံး ပစ်သွင်းပေးခြင်း) ချူလို့ မထွက် တော့ Glycerine Enema (S.S Enema တချို့ သုံးသည် ) ။ဒါကတော့ ဂလစ်ဆရင်း အရေကျဲ သို့ မဟုတ် ဆပ်ပြာရည်ကျဲ ကို ၂၀၀ မှ ၃၀၀ စီစီ လောက် ထဲ့ပြီး ဝမ်းချူ တာလည်း မထွက် ။ ဒါနဲ့ ပဲ သူ့အကျပ်အတည်း ကို လက် နဲ့ကော် ပြီး ရှင်းပေးလိုက်ရသည် ။ စအိုဝ နဲ့စအိုထဲ တစ်နေတဲ့လောက်စလုံး လို မာမာ စမြင်းတုံး များ လက်တဆုပ်စာလောက် ထွက်သွားတော့ မှ" ရှေ့ ဆောင် နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှ နောက်နွားစဉ်စိုက် ဖြောင့်ဖြောင့် လိုက်၏" ဆို သလို .....တန်းစီ ထွက်လာပြီး ဒီအဖိုးကြီး နေသာထိုင်သာ ရှိသွားရပါတော့ သည် ပေါ့ ကွယ် ။ သူ က သာ နေသာထိုင်သာ ဖြစ်သွားရတယ် ။ မနက်စာ မစားရသေးတဲ့ကိုယ် တယောက် ဒီနေ့ အဖို့မနက်စား စားလိုစိတ် မရှိတော့ပါ။
E ဇာတ်လမ်းက ဒါနဲ့တင် မပြီးသေးပါ ။ ၁၀ နာရီ ထိုးတော့ ၆ထပ် မှာ ရှိတဲ့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့လူနာတွေ အခန်း သွားတဲ့ အချိန်လဲ E မှန် လိုက်ရသေးတယ် ။ ကျောက်ကပ်ဆေး တာက လူ နာ တယောက်ကို တပါတ် မှာ ၃ ခါ ဆေးရတယ် ၊ တခါဆေးရင် ၄ နာရီကြာ ဆိုတော့ ဆေးရုံ ဟာ ကိုယ့်အိမ်လို ဖြစ်နေကြ ပါပြီ ။လူနာ နဲ့ဆရာဝန် ဆရာမတွေ ဆိုတာ လည်း မိသားစု လိုပဲ ရင်းနှီးနေကြ ပြီလေ ။ အသက်ကြီးတဲ့ လူနာတွေ များတော့ ရှက်တာ တို့အားနာ တာတို့ဆိုတာလည်း မရှိကြဘုးပေါ့ ၊ကုတင်ပေါ်မှ ဘူဘူ ဘွမ်ဘွမ် အသံဗလံ တွေ ဟာလည်း ရိုးနေကြပါပြီ ။ အဲဒီ အထဲ မတော့ လူနာအဖွားကြီး ဝဝ တယောက် ဆီးချို သွေးတိုး တွေ ရှိတာလည်း အစားမရှောင် ။ ကြိုက်လိုက်တာ က လဲ ကြက်ဥ ဘဲဥ ပြုတ် နဲ့ကန်စွန်းဥ ပြုတ် ။ အမြဲ လိုလို စားနေတာ တွေ့ ရတယ် ။ ဘယ်လို မှ လည်း ပြောမရ ။ လျှော့စားပါ ဆိုတာလည်း နားမထောင် ။ အဲဒီတော့ သူ့ဗိုက်က လေအမြဲ ပွနေတတ်တယ် ။ သူ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ကလည်း ပြင်းထန် ပါပေ့ ။ ဒီနေ့ တော့ တီဗီထဲက လေကြောင်းသရုပ်ပြတာ နဲ့အပြိုင် အသံစုံ အနံ့ စုံ အသကုန်လွှတ် တိုက်ခိုက်ခြင်း ကို ခံလိုက်ရတော့ .... လူ လည်း E ဆိပ် မိပြီး မအီမလည် ။ ( ဒါတောင် အစာကြေ လေနိုင်တဲ့ဦးချိန်တီတို့၊ ဂြိုလ်တု တို့၊ အောင်တံခွန် ဆင်တုံး မနွယ်တို့သူ တို့မသိကြသေးလို့တော်ပါသေးရဲ့) ။ ဒါနဲ့ ပဲ E ဋီကာလေး ဆက်ဖြစ်သွား ပါတယ် ။ကလစ်နှိပ်ပြီးဆက်ဖတ်ပါ .....
Posted by Taikkyithar lay at 11:43 No comments: Links to this post
မိန်းမပျိုတစ်ဦးသည် မြို့ ထဲသို့ အလည်အပတ်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်မိခင်ဖြစ်သူက…
သမီးက ဘယ်ကိုသွားမလို့ လဲကွယ်၊ ရာသီဥတုတွေက ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိတာမှမဟုတ်ဘဲ
ဂျင်မီနဲ့ ချိန်းထားလို့ ပါမေမေ၊ သူနဲ့ လျှောက်လည်ကြမလို့ ပါ
သတိထားနော် သမီး၊ မိုးများရွာမလားမသိဘူး၊ အမေလည်း သမီးအရွယ်တုန်းက သမီးလိုပဲချိန်းထားတဲ့ ယောင်္ကျားကလေးသူငယ်ချင်းနဲ အလည်အပတ်ထွက်လိုက်တာ
လမ်းမှာ ရုတ်တရက်မိုးရွာချလိုက်လို့ မိုးအတိတ်စောင့်ရင်းနဲ့ မိုးစုန်းစုန်းချုပ်သွားတယ်၊
အိမ်ကိုမပြန်ရဲဘဲ သူခေါ်ရာနောက်ကို အမေတစ်ခါတည်းလိုက်သွားခဲ့တယ်။သမီးလည်း
အမေ့လိုအဖြစ်မျိုး ကြုံတတ်တယ်နော်၊ ဒီနေ့ မိုးလေမကင်းရှင်းဘူး
သမီးဖြစ်သူက ဖြည်းလေးစွာပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်လေ သည်။
စိတ်ချပါအမေ၇ယ်၊ ဒီနေ့ ရာသီဥတု သာယာမှာပါ မေမေ၇ယ်၊မိုးမရွာနိုင်ပါဘူး၊ သမီးကိုချိန်းထားတဲ့ ယောင်္ကျားကလေး က မိုးလေ၀သဌာနကပါမေမေ ဟူ၏။
သမက်လောင်း။ ။ ခင်ဗျားသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးထားဖို့ကျွန်တော်တောင်းချင်ပါတယ်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးက သူ့ရည်းစားကောင်မလေးကို ပြောနေသည်။
ထမင်းလခ ပေး စားမယ်ဆိုတော့ ကိုက ငွေမှမရောက်သေးတာ
အိုကွယ်ဘာလို့ တစ်ချိန်တည်းမှာပြဿနာနှစ်ခုကို စဉ်းစားနေရတာလဲ ဟူ၏။
ရှင်ဟာ ကျွန်မတို့ ကလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတုန်းက ရှင်နဲ့ ကျွန်မ လက်ထပ်တဲ့ နေ့ 
ရောက်ရင်ကျွန်မကို အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပေးလေ့ရှိတယ်
အခုလည်း ဘာဖြစ်လို့ လဲကွာ
ဘာဖြစ်ရမှာလဲ၊ အခု ကလေးငါးယောက်ရပြီ၊ရှင်လည်း ကျွန်မကိုအထိမ်းအမှတ်
ဟုတ်တယ်၊ ကလေးငါးယောက်ရပြီပဲ၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းလိုသေးလို့ လား ကွာဟူ၏။
ပပ။ ။ဟဲ့….မြမြ၊နင့်ရည်းစားက နင်ချစ်ခဲ့သမျှတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ ပြန်သလဲဟင်
မြမြ။ ။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပဲတုံ့ ပြန်ပါတယ်
ပပ။ ။ သူနဲ့ ငါ ရည်းစားဘ၀မှာတုန်းက ငါပေးခဲ့တဲ့ ချစ်သက်လက်ဆောင်တွေကို
ပြန်ပေးခဲ့ပေမယ့် စိန်လက်စွပ်နဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးကိုတော့ ပြန်မပေးတော့ဘူးလေ ဟူ၏
လူပျိုတစ်ဦးသည် မျက်စောင်းထိုးခြံထဲမှ အပျိုတစ်ဦးအား တစ်ဖက်သတ်ချစ်ခင်စုံမက်လျက်ရှိ၏၊ အပျိုဖြစ်သူက သိ၏။သို့ သော်အကြောင်း
တစ်နေ့ ညနေခင်း မှောင်ရီပျိုးစအချိန်တွင် အပျိုဖြစ်သူ၏ နေ အိမ်၌တစ်ယောက်တည်းရှိနေသည်ကိုလူပျိုဖြစ်သူကချက်ချင်းသိရှိလိုက်၏။ထို့ ကြောင့် အပျိုဖြစ်သူ၏အိမ်သို့အရဲ့ စွန့် ၍သွားလိုက်လေသည်။အပျိုဖြစ်သူက လူပျိုဖြစ်သူ အိမ်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်နှင့်
ဒီမှာ ကျွန်မ ရှင့်မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူး ၊ရှင့်မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူး
အပျိုဖြစ်သူက လူပျိုအား လေသံမာမာဖြင့် ပြောဆိုလိုက်လေသည်။
လူပျိုဖြစ်သူက မည်သို့ သဘောပေါက်သွားသည်မသိ။မျက်စိကနံရံပေါ်မှမီးခလုပ်သို့ 
ပြောပြောဆိုဆို လူပျိုက မီးခလုပ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ တစ်အိမ်လုံး မှောင်ကျသွားလေသည်။
လူငယ်အမျိုးသား။ ။ဦးရဲ့ သမီးနှင့်ကျွန်တော့်ကိုလက်ထပ်ခွင့်ပြုပါဦးရယ်
သမီးဖခင်။ ။ မင်း အရက်ကလေးဘာလေးသောက်တတ်သလား
ဒို့ ကို တစ်ကယ်ချစ်ရဲ့ လား
ဒီလိုဆိုရင် တို့ အတွက် အသက်အသေခံနိုင်ပါ့မလား
ဒို့ အချစ်က မသေတဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
မင်းကို ကိုယ် လက်ထပ်ချင်ပါတယ်၊ လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါကွယ်
ရှင်နဲ့ ကျွန်မတွေ့တာ နှစ်ခါပဲရှိသေးတယ်လေ၊သိကျွမ်းတာ နှစ်ခါပဲရှိသေးတယ်၊ လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မလွန်ဘူးလားရှင်
မလွန်ပါဘူးခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် သိနေတာကြာပါပြီ
မင်း ဘဏ်မှာ ငွေတွေမျေားကြီး ခဏခဏလာအပ်နေကတည်းကပါ၊ ကိုယ်က အဲဒီဘဏ်ရဲ့ဧည့်ကြိုလေ ဟူ၏။
လူငယ်တစ်ယောက်သည် ကားတစ်စီးကိုငှားပြီးချစ်သူမိန်းခလေးအား ခိုးပြေးလေသည်။
လုံခြုံစိတ်ချရသော မြို့ တစ်မြို့ ရှိ သူငယ်ချင်း အိမ်သို့ ရောက်သောအခါ….
ပေးဖို့ မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ ကားခကိုခင်ဗျားခိုးလာတဲ့မိန်းခလေးရဲ့ အဖေက အလုံအလောက်ပေးပြီးပါပြီ၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုလည်းစာပေးလိုက်ပါတယ် ဟုပြောပြီး
ကားဆရာက စာတစ်စောင် ပေး၏။
ပြောမရ ဆိုမရ ဆုံးမ မရလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ မိဘများရဲ့ဒုက္ခကို
ပခုံးပြောင်းလွဲယူသွားတဲ့မောင်၇င့်ကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ကား ခပေးပြီးပါပြီ၊ ဝေးဝေးကိုသာခိုးသွားပါကွယ်ဟူ၏။
စန္ဒာ။ ။ ငါ့ဘ၀မှာ နောင်တရလို့ မဆုံးဖြစ်၇တဲ့ နေ့ ဟာ ငါ့မိဘတွေ
စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရတဲ့ နေ့ ပါပဲ
သန္တာ။ ။ ငါမင်းနောင်တရတာကိုနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
မင်းယောင်္ကျားရဲ့ရုပ်နဲ့ အသံကို အဲဒီနေ့ က စပြီးမြင်ခဲ့ရတာပဲဟူ ၏။
ပင်မတက္ကသိုလ် စာသင်ဆောင်ရှေ့ တွင် ကျောင်းသူနှစ်ယောက်စကားပြောနေ
ငါတော့ချမ်းသာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်ဆ၇ာ
ဟင့်အင်း..ငါကတော့သူ့ ကိုသူချမ်းသာတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ပဲဖြစ်
ချင်တယ်။ သူတို့ ကမှတစ်ကယ်၇က်ရောတာဟ ဟူ၏။
မိန်းမပျိုတစ်ဦးကို လူပျိုလှည့်နေခဲ့သော လူရွယ်ကို ထိုမိန်းမပျို၏ ဖခင်က
ထူထဲသော မိသားစု ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ် တစ်ခုပြသနေခဲ့သည်။ မိသားစုဝင်
အများအပြား၏ ဓါတ်ပုံများကိုဂုဏ်ယူစွာပြသပြီးနောက်တွင် ခန့် ညားထွားကျိုင်း
လှသော သူကြီးတစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံကိုပြသ၍ ၀င်ကြွားစွာဆိုလိုက်သည်။
သူကတော့ ဒီမိသားစုကြီးကို စတင်ထူထောင်လိုက်တဲ့ ငါ့တို့ ရဲ့ 
ဟုတ်လား… သူက ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဟုလူရွယ်က မေးလိုက်သည်။
သူဒီမိသားစုကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တာပေါ့ ဟုအဘိုးကြီးက ထပ်ဖြေလိုက်သည်။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက သူဂုဏ်ယူလောက်စရာဘာတွေလုပခဲ့သလဲလို့ 
ဟ… အခုလိုထင်ရှားကျော်ကြားအောင်မြင်နေတဲ့တို့ မိသားစုကြီးကိုသူစကန
အဲဒါကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဦး၊ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက နေ့ ခင်းဘက်မှာ
သူ ဘာလုပ်ခဲ့လဲလို့ ဟူ၏။
multiply kooka17 ထံမှဖတ်မိသည့်ဟာသလေးများကို ပြန်လည်ကူးယူမျှဝေထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Taikkyithar lay at 11:39 No comments: Links to this post
FX Willhill casino Spin Palace Casino casino swiss Flag Counter
တိုက်ကြီးသား. Picture Window theme. Powered by Blogger.